Apple na-agbasawanye ebe nyocha ya na Seattle iji kwụsie ike na ọgụgụ isi | Esi m mac
Apple na-agbasawanye ebe nyocha ya na Seattle iji kwụsie ike na ọgụgụ isi
Anyị amụtala, na n'ihu ọha, na Apple ekpebiela ịgbasa ebe nyocha ya dị na Seattle. Ebe ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-abụ mmepe nke teknụzụ ndị ga-eme n'ọdịnihu nke ọgụgụ isi na mmụta igwe, ọ bụghị naanị maka ngwaahịa mkpanaka dịka iPhone ma ọ bụ Apple Watch, kamakwa maka Macs.
Apple na-edebekarị ụdị nyocha a na nzuzo, mana oge a ụlọ ọrụ apụl emeela ọkwa n'ihu ọha. Na mmekorita ya na ulo akwukwo mahadum, o gosiputala oche dolla 1 maka ebumnuche a. Otu ihe atụ bụ mmekọrịta chiri anya ọ na-akwado na Mahadum Washington dị ka nkwado teknụzụ.
Dabere na Carlos Guestrin, onye nduzi Apple maka igwe mmụta:
Anyị na-anwa ịchọta ndị kachasị mma nwere obi ụtọ banyere AI na mmụta igwe. Obi tọrọ m ụtọ banyere nyocha na iche echiche ogologo oge, kamakwa ịsụgharị echiche ndị ahụ na ngwaahịa ndị na-emetụta ma si otú a na-atọ ndị ahịa anyị ụtọ.
N'aka nke ọzọ, isi ụlọ ọrụ Seattle, na mgbakwunye na mmepe AI, anyị nwere ike ịchọta ndị otu na-arụ ọrụ na Maapụ, iCloud na iTunes. Isi ụlọ ọrụ a na-arụkọ ọrụ na isi ụlọ ọrụ dị na Cupertino, a ga-emekọrịta ya n'ọdịnihu na Apple Campus ọhụrụ, amaara maka ụbọchị ole na ole Ogige Apple, site na ntinye ya, Eprel na-abịa.
Apple ga-elekwasị anya na Seattle site na nkuzi igwe, ihe dị mkpa na ngalaba sara mbara nke ọgụgụ isi, nke a ga-akọwapụta dị ka ike nke mmemme iji mụta site na data na ọrụ onye ọrụ, ịme ihe ụfọdụ akọwapụtara, na-emeghị doro anya nke ọma ịme ya.
N'ezie, ụlọ ọrụ kachasị mma na teknụzụ dịka Microsoft ma ọ bụ Amazon bụ otu ihe ahụ dị ka Apple, na-etinye nnukwu ego na teknụzụ a.
Onye njikwa ọrụ ugbu a, Carlos Guestrin, sonyeere Apple n'afọ gara aga, site na Turi, ụlọ ọrụ Apple nwetara. Guestrin bụkwa prọfesọ na Mahadum Washington.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-agbasawanye ebe nyocha ya na Seattle iji kwụsie ike na ọgụgụ isi
Orion Fighter, nweere onwe ya maka obere oge
Apple Pay ING Australia, Apple Watch Series 3, Apple Park, na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac